မသေချာလျှင် မကြေငြာနှင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မသေချာလျှင် မကြေငြာနှင့်
Posted by သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) on Mar 14, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 16 comments
ခေတ်နှင့်အညီ တိုးတက်နေသော အချိန်တွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီလှုပ်ရှားနေရသော သူများသည် အသေးအမွှားကိစ္စကိုပင် စိတ်မရှည်ကြဟုပြောလျှင် သူလက်ခံပါသည်။ သူလည်း နည်းနည်းလေးမျှ သည်းခံစိတ်မရှိပေ။ စောင့်ဆိုင်းရခြင်းဟူသည် သူ့အတွက်တော့ ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ရာ ကောင်းလွန်းလှသည်။ သို့သော် မစောင့်လျှင်မရဟူသော စကားတစ်ခွန်းက သူ့ဆီသို့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာချေသည်ကော။
မသေချာလျှင် မကြေငြာသည်ကပင်ပိုကောင်းသည်ဟု ဗျို့ဟစ်၍ပင်ပြောလိုက်ချင်နေတော့သည်။ ဖြစ်ပုံကို ပြောပါမည်။ သူသည် လွန်ခဲ့သော လ (တိတိကျကျ)ပြောရလျှင် သုံးလခန့်က ခုခေတ်စားနေပါသော ငါးသိန်းတန် CDM450 MHzတစ်လုံး ၀ယ်ကိုင်မိသည်။ ထိုဖုန်းသည် သူ နှစ်လလောက်သာ ကောင်းကောင်းပြောလိုက်ရပြီး လက်ကမြင်းမိသောကြောင့် ကဒ်ပျက်သွားလေတော့သည်။ ရှိစုမဲ့စုလေးကို စုဆောင်းဝယ်ယူထားသော ၀န်ထမ်းဖြစ်သူ သူ့အဖို့ မီးခဲပေါ်ထိုင်မိနေသကဲ့သို့ ဟိုပြေးသည်ပြေးရတော့သည်။
နောက်ဆုံးတော့ ကဒ်ပျက်လျှောက်ရမည်ဆိုသော အချက်သာလျှင် ၀ိုင်းဝန်းအတိပြုကြသောကြောင့် မူရင်းဝယ်ယူထားသော ဆိုင်သို့သွားရောက်၍ ကဒ်ပျက်လျှောက်ရန် လုံးပန်းရလေတော့သည်။ သို့နှင့် မန်းလေးရှိ သူ့သူငယ်ချင်းရှိရာသို့ ဖုန်းကဒ်ကိုပို့၊ ၀ယ်ယူထားသော စာရွက်စာတမ်းများကို ပို့နှင့် အလုပ်ရှုပ်ရလေသည်။
မန်းလေးရှိ မူရင်း ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီသို့ပို့ကြည့်တော့ သုံးပတ်လောက်ကြာမည်ဟုဆိုသည်။ သွင်းစရာရှိသည့် ငွေများသွင်းပြီး စောင့်ဆိုင်းနေသည်မှာ သုံးပတ်ပင်မကတော့ ငါးပတ်ပင်ကျော်လာသည်။ ဖုန်းဆက်မေးတော့လည်း မရသေးပါဟု အကြောင်းပြန်သည်။ သူတို့ကုမ္ပဏီကပင် ဂျာနယ်များတွင် လေးရက်သို့မဟုတ် တစ်ပတ်ခန့်သာ ကြာမြင့်မည်ဟု ပြောကြားထားသေးသည်။ အခြား သူငယ်ချင်းများကလည်း သူတို့ပင် ကဒ်ပျက်သဖြင့် ပြန်လျှောက်သည်မှာ ဆက်သွယ်ရေးရုံးတွင် တပတ်ခန့်ပင်ကြာမြင့်သည်ဟုဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဟိုရွေ့ သည်ရွေ့နှင့် လုပ်နေသည်မှာ အပြောနှင့် လက်တွေ့မညီသလိုဖြစ်နေလေတော့သည်။ စောင့်ဆိုင်းရခြင်းကြောင့် နှောင့်နှေးသွားရသော အလုပ်အကိုင်များ၊ အဆက်အသွယ်များသည် အစားထိုးမရသော အရာများပင်ဖြစ်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ ယခုကဲ့သို့သော ကဒ်ပျက်သော ကိစ္စလောက်ကိုပင် တစ်လကျော် နှစ်လနည်းပါးလောက်စောင့်ဆိုင်းရခြင်းသည် ဘ၀င်ကျစရာမကောင်းပေ။ ဆက်သွယ်ရေး ရုံးကိုပင် သွားရောက်မိလျှင်ပင် ပြန်ရနေလောက်ပြီ။ ခုတော့ နှစ်သိန်းတန်ဖုန်းများ ကျရောက်၍ပင် ဈေးကွက်အတွင်းတွင်ပင် ရောင်းချနေကြပြီ။ သူ့ဖုန်းကတော့ ရမလာသေး။ ၀န်ဆောင်မှုကောင်းအောင် မည်သို့များ ထိုကုမ္ပဏီက ဖော်ဆောင်နေကြပါလိမ့်ဟု သံသယဖြင့် တွေးကြည့်မိရသေးသည်။
ထို့ကြောင့် သေချာမှသာလျှင် ပြောကြပါ..မသေချာလျှင်
မှတ်ချက်။ ကုမ္ပဏီနာမည်ကိုတော့ဖြင့် မပြောပြတော့ပါ။
အဲဒါများဆိုင်ထဲမှာပတ်အော်ပြစ်ရမှာ။ ဒါမှနောက်ဝယ်မဲ့လူတွေလဲသူ့ဆိုင်မှာမ၀ယ်တော့အောင်။ ကျွန်မတုန်း ကလဲ အဲလိုပဲ။ ထမင်းစားစာပွဲနဲ့ခုံတွေသွားဝယ်တာ။ ရောင်းတုန်းကပြောလိုက်တာရွှန်းရွှန်းဝေ။ ဂရန်တီ ၁ နှစ်တဲ့။ အသစ်လဲပေးမှာဘာညာနဲ့ပေါ့။ တလလောက်မှာပဲခုံကျိုးသွားတယ်။ သွားပြောတော့ ပြင်ပေး မယ်ထားခဲ့တဲ့။ နောက် ၂ ရက်နေမှလာယူပါတဲ့။ ကိုယ်တွေလဲဘာမှမပြောပဲထားခဲ့ပါတယ်။ သွား လဲရွေးရောစောင့်ပါအုံးတဲ့။ ၁ နာရီလောက်စောင့်ပြီးမှ ဆင်ဖို့ဝက်အူကျန်ခဲ့တယ်။ စက်ရုံမှာပြန်ယူရမယ်ဆိုပြီး ၁ နာရီလောက်ထပ်စောင့်ရတယ်။ ဘယ်ရမလဲ ထိုင်စောင့်နေပြီးဝယ်သူတွေဝင်လာမှ အော်တာ။ မန်နေဂျာပြေးလာပြီးအသစ်ပေး လိုက်ဆိုပြီးအသစ်ပေးလိုက်တယ်။ ကားထဲအထိလိုက်ပို့ပေးတယ်။ ၀ယ်မဲ့လူတွေလဲပြေးရော။ ရုံးခန်းတခုစာ one set ၀ယ်မှာတဲ့။ သူတို့နစ်နာသွားတာပေါ့။
You are our MG villager.
I do proud of you, Sister( Ma Thel Nu Aye ).
အားပေးလို့ကျေးဇူးပါ။ သူများတွေကကျွန်မကိုစွာတယ်တဲ့။ ဟီဟိ။ တကယ်တော့မဟုတ်မခံလေးပါ။
ခပ် KING ကင်း says:
2011 နှစ်စပိုင်းက CDMA 800 MHz ကဒ်ပျက်တုံးက ဆက်သွယ်ရေးမှာ အလွယ်လိုက်ပြီး ပွဲစား(ဆက်သွယ်ရေးမှဝန်ထမ်း)ကို အပြီးအစီး ၁၁၂၀၀၀ိ/- ပေးလိုက်ပါသည်။ ယနေ့ ပေး မနက်ဖြန်နေ့လည် ကဒ်အသစ်ပြန်ရ … လိုင်းပြန်ဖွင့်ပြီး … တစ်ပတ်အကြာ အင်တာနက်ပါ ဖွင့်သုံး၍ရ … ထူးဆန်းပေစွ ကျွန်တော့်ဘ၀ ….
Anaconda MMT says:
အခုဂျီ 5တိန်း တန်ဖုန်းတွေ ဂျီ အချင်းချင်းခေါ်ရင်..တစ်ချိုးဖုန်းတွေ.no answer ဆိုပြီး ပြောမရခေါ်မရဖြစ်နေတယ်
သိတဲ့သူများ လင်းပါအုံး..လိုင်းကျပ်တာ မဟုတ်ဘူးနော်.
ဟန်းဆက် လဲပြီးခေါ်လဲ ဒီတိုင်းပဲ..
ဘယ်သူက တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးမှာလဲ..
ဒီလိုနဲ့ပဲ တစ်နေ့နေ့တော့ ကျလာပါလိမ့်မည်…
သေစမ်း သေစမ်း သိတဲ့ အတိုင်းဟာကြီးကို ။
သူတို့ က အခု တမျိုး တော်ကြာ တမျိုး တွေလေ ။
တော်ကြာတမျိုးပြီးရင် နောက်တမျိုးထပ်လာ လိမ့်ဦးမယ် လေဟာ ။
အဲ့ကောင်တွေ အုပ်စု က ငိုစားရီစားတွေ ။
အခုတော့ သူတို့ခမျာတွေလဲ သောက်မင်ကပ်ဖို့ကောင်းလောက်အောင်
မျက်စိလေး ကလည်ကလည်နဲ့ မျက်ခွက် ချီးဖတ်လောက်ပဲ ရှိတော့တာဟ ။
သွားရိုက်တော့ ကျွန်တော့် CDMA 800 MHz ဖုန်းလေးပျောက်သွားတာ..
ပြန်မရတော့လို့ ဆက်သွယ်ရေး ရုံးချုပ်မှာသွားလျှောက်တာ(ကိုယ်တိုင်)
ဒါမှနောက်လူတွေ ဒီလိုတာဝန်မဲ့တဲ့ ကုမ်ပဏီမျိုးကို
ဒါကို သေချာပြုလုပ်သင့်တယ်။ ဒီလိုသာ ဖြစ်နေရင် ဘယ်သူက ဘယ်လိုယုံကြည်ပြီး အသုံးပြုကြမှာလဲ… နာမည်ပြောပြပါဦး ရှောင်လို့ရအောင်လေ…
ဒီလို လုပ်စားရိုက်စားလုပ်နေတာများပြီ….။ ၀ယ်တော့ တမျိုး၊ ၀ယ်ပြီး နောက်ပိုင်းတမျိုး။ သူတို့တွေပဲ တတ် တတ်နိုင်ကြတယ်။ အဲ့ဒီနေရာတွေကို List လုပ်ပြီး စာရင်းထုတ်ထားရမယ်။ ရှောင်ရန် နေရာများအဖြစ်နဲ့။
အော် …. ဒါမျိုးတွေလည်းကြုံရပေသကို … နောက်ဆိုဖုန်းကိုင်ရင် လက်မဆော့ရဲတော့ဘူး အလုပ်ရှုပ်လွန်း လို့ ……….. အဟိ
Thel Nu Aye လုပ်ရပ်ကို ထောက်ခံပါတယ်ရှင့်…..
ကိုသော်ဇင်ရေ၊ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ Customer Complain အတွက် တိုင်လို့ရတဲ့ နေရာက ခိုင်ခိုင်မာမာ မရှိသေးတော့ ကိုသော်ဇင်ပြောခဲ့ သလိုဖြစ်နေရတာဗျာ။
ဘာကောင်းညာကောင်းတွေ၊ ဘာလုပ်ပေးတယ် ဘာညာတွေ၊ ပျက်နေရင်တောင် အသစ်တစ်လုံး ချက်ချင်း အစားထိုးပေးတယ် ကြော်ငြာကြပြီးမှ တစ်ကယ်တန်းကျတော့ မလုပ်ပေးတာတွေက များမှများပါဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ Customer Complain တွေအတွက် ထိထိရောက်ရောက်ရှိတဲ့ နေရာလေးတစ်ခု ရှိစေချင်ပါတယ်။
အဲ့လိုမျိုး Website တစ်ခုလောက်ထောင်ရင်ကောင်းမလား .. ? ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က မထောင်တတ်ဘူးဗျ . ဟိး . ထောင်ချင်တဲ့သူရှိရင် ပြော .. ကျွန်တော့် မှာ တော့ resources တွေရှိတယ် ..